♥♥♥ ♥♥ အလွမ်းမြို့လေး♥♥ ♥♥♥: တန်ဖိုးထားတတ်ပါစေ
ရှင့်ကို ကျမကျေးဇူးတင်တယ် ကိုလေးရယ်လို့ ကျမ ပါးစပ်လေးက ခပ်ဖွဖွ တိုးတိုးလေး တစ်ယောက်တည်း ပြောနေမိတယ်။
အတိတ်ဆီသို့ ပြန်တွေးမိလေတော့ ... အင် ... ဘာလိုလိုနဲ့ ဒီနေ့ဆို ရှင်နဲ့ကျမ လမ်းခွဲခဲ့တာ (၉)နှစ် တိတိပြည့်ခဲ့ပြီဘဲ။ ကျမမှတ်တမ်းလေးကို ပြန်လှန်ကြည့်လိုက်တော့ ဒီနေ့ဟာ ရှင်ကျမကို မပြောမဆို တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့တာ (၉) နှစ်တိတိ ပြည့်တဲ့နေ့လေးဘဲ။ အတိတ်ဆိုတာ ပြန်တောင်းတတိုင်း မရမှန်း ကျမသိပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ခါ အဲဒီအတိတ်က အကြောင်းတွေကဘဲ ကျမရင်ကို သတိရစိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
..... ကိုလေးနဲ့ ကျမဟာ ဟိုးငယ်စဉ်အတည်းက အတူကြီးပြင်းလာပြီး အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေ အိမ်နီးချင်းတွေပေါ့။ အရွယ်တွေလည်းရောက်လာတော့ သူငယ်ချင်းအဆင့် အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေ အဆင့်တွေကျော်ပြီး ချစ်သူတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။
သူငယ်ချင်းရဲ့ ဘဝမှာတုန်းကလည်း ကိုလေးကကျမကို အလိုလိုက်ခဲ့တယ်။ သီးခံတယ်။ ခွင့်လွှတ်တယ်။ စိတ်ရှည်တယ်။ အနစ်နာခံတယ်။ ကျမကို အမြဲဦးစားပေးတယ်။ အလေးထားတယ်။ ဒါလေးတွေနဲ့ ကျမ အမြဲပျော်ခဲ့တယ်။ ဒါတွေကလည်း သူငယ်ချင်း ဘဝမှာတုန်းကတော့ ပျော်စရာဆိုပေမဲ့ ချစ်သူဘဝလည်းရောက်ရော ဒါတွေဟာ ကြားခံနယ်တွေထဲက ညှိနှိုင်းရတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ကိုလေးဘက်ကလည်း ချစ်သူဖြစ်ပြီးမှ ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ယုတ်လျှော့သွားမှု့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဘာဆိုဘာမှ မပြောင်းလဲခဲ့ပေမဲ့ ကျမ ရဲ့ အတ္တတွေက ပိုကြီးထွားလာတယ်။ ကိုလေး ကျမကိုချစ်နေတာဘဲ ကျမမှလွှဲရင် သူတစ်ခြား မိန်းခလေးကို မချစ်ဖူးဆိုတာ ကျမ ရဲ့မာနအတွေးတွေပေါ့။ ငါ ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ ကိုလေး သီးခံ ခွင့်လွှတ် စိတ်ရှည် အနစ်နာခံတွေကို ကျမ အမြဲလို ဥပက္ခာထား အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ ကိုလေး ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို နားလည်ခဲ့ပေမဲ့ တန်ဖိုးမထားခဲ့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ကျမတို့ရဲ့ ချစ်ခရီးလမ်းမှာ ငိုကြွေးမှု့ ကြေကွဲမှု့ မာနတွေနဲ့လျှောက်လာခဲ့တာ ပန်းတိုင်မရောက်ခင်ဘဲ ကိုလေး ကျမကို ရက်စက်စွာထားခဲ့တယ်။ ကိုလေး ကျမကိုဘာမှအသိမပေးဘဲ တိုင်းတစ်ပါးကို ထွက်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် ကျမ ဘယ်လိုဘဲ ကိုလေးအကြောင်းစုံစမ်းခဲ့ပါစေ သတင်း အတိုအထွာ အစလေးတောင် မရမရခဲ့တော့ဘူး။ ကိုလေး ထွက်သွားတာ ဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ရင်ဖွင့်မပြောခဲ့သလို နှုတ်မဆက်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ ကျမ ကိုလေးအပေါ် အရမ်းစိတ်နာခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ ကိုလေးက ကျမကို စိတ်နာရမှာလား ကျမက ကိုလေးကိုစိတ်နာရ မှာလားဆိုတာ အမေး ၂ ခုပါ ။
ကျမကို ထားခဲ့ရမလားဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ အချိန်မို့ ကျမရဲ့ မာနတွေက မလျှော့သေး။ ကိုလေးကိုသာ အပြစ်တင်စကား ဆိုမိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အချိန်သာ တစ်ရွေ့ရွေ့ပြောင်း နေ့ရက် ရာသီ အလီလီပြောင်းလာခဲ့ပေမဲ့ ကျမ ကိုလေးသတင်း စုံစမ်းခဲ့ပေမဲ့ သတင်း အစအနလေးတောင် မရခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် နေလာခဲ့တာ နှစ်တွေအတော်ကြာလာခဲ့တယ်။
ကျမလည်း တစ်နှစ်ပြောင်းလေ အသက် တစ်နှစ်ကြီးလာပြီမို့ ဘဝမှာ ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်သင့်တာတွေ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်သင့်တာတွေ တန်ဖိုးထားရမှာတွေ အလေးမထားသင့်တာတွေ တဖြေးဖြေး ခွဲခြားနားလည်လာတယ်။ လူပေါင်းစုံနဲ့ ပေါင်းသင်းတတ်လာတယ်။ ဘဝမျိုးစုံကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတယ်။
ဒီလို လူပေါင်းစုံနဲ့ ဆက်ဆံခဲ့ရတော့မှာဘဲ ကျမကိုယ်တိုင် ငိုခဲ့ရဖူးတဲ့ည မလုပ်သင့်တာလုပ်မိလို့ ဆုံးရှုံးခြင်းတွေသာရရှိခဲ့တဲ့ နောင်တ တန်ဖိုးထားရမှာတွေ တန်ဖိုးမသိတော့ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ဘဝ တွေကိုသေချာ နားလည်သဘောပေါက် ခဲ့ရတယ်။
ဒီလိုချိန်ရောက်တော့မှ ကျမ အသိက နောက်ကျခဲ့ပြီ။ (ကိုလေး ကျမ အပေါ် အနွံတာခံ ချစ်ခဲ့တာကို ကျမ မိုက်မဲစွာ ဥပက္ခာပြုပြီး ကိုလေး မေတ္တာ စေတနာ အကြင်နာတွေကို တန်ဖိုးမဲ့စေခဲ့တယ်။ ခုတော့ ကျမ ... တန်ဖိုးထားရမဲ့ အရာတွေကို တန်ဖိုးထားတတ်လာချိန်မှာတော့ အရမ်းနှောင်းခဲ့ပြီ။
မနှစ်က သင်္ကြန်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ကိုလေးနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ ပြန်ဆုံခဲ့တယ်. ဒါပေမဲ့ ကိုလေးက ဟိုးတစ်ချိန်က ကျမ ချစ်သူ ကိုလေးမဟုတ်တော့တာ သေချာတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရင်ကလို တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်တော့ဘူး။ ကိုလေး ဘဝအတွက် လက်တွဲဖော်အဖြစ် ဆိုးအတူ အကောင်းအတူ ရပ်တည်လာခဲ့တဲ့ မဟေသီလေးလည်း ပါလာတယ်။ ဘေးနားမှာလည်း ချစ်စရာ သမီးကြီးရယ် သားငယ်လေးရယ်။ မိသားစုတွေ ပျော်ရွှင်နေကြလိုက်တာ။ သူတို့မိသားစုလေးကို ကြည့်ပြီး ကျမ ပါးမြင်မှာ မျက်ရည်ကျချင်ပေမဲ့ အသိစိတ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲဝယ်လို့ နှိုးဆော်လာတော့ ကျမ ပီတိတွေနဲ့အတူ ခံစားမှု့တွေကို မျိုသိပ်လိုက်တယ်။
ကိုလေးတို့ မိသားစုကို ကျမ သွားနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ နေကောင်းတယ်နော် ကိုလေးဆိုတော့ ကိုလေးကလည်း နေကောင်းကျန်းမာပါကြောင်း ပြန်ပြောပြီးပြုံးချိုစွာ နှုတ်ဆက်ရင်း ဘေးနားက ကိုလေး မဟေသီ ( ညိုညို)နဲ့လည်း မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုလေးကလည်း ကျမ ကို (မိဆိုး) နင်အရင်တိုင်းဘဲ လားဆိုတော့ ကျမ အသာခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကျမ ခေါင်းညိတ်ပြတာက ကျမ အရင်လိုဘဲ တစ်ယောက်တည်းဆိုတာကို နှုတ်နဲ့မဖွင့်ပြော ဝံ့တော့တာမို့ ခေါင်းညိတ်ပြခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျမ ခေါင်းညိတ်ပြတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ကိုလေး ဘယ်လို ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုတာ ကျမ မသိခဲ့ပါ။ ကိုလေး ကျမကို အရင်လိုဘဲလားလို့ မေးတဲ့မေးခွန်းဟာ ကျမရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကို မေးတာလား ကျမ ဘဝမှာ အိမ်ဦးနတ်အုပ်စိုးမှု့မရှိသေးတာကို သိချင်တာလား။ ကျမ ဝေခွဲမတတ်ပါ။
ကျမတို့ စကားရပ်ပြောနေတုန်း သားငယ်က ကိုလေးအနားပြေးလာပြီး ဖေဖေ သား ရှူးရှူးပေါက်ချင်တယ်လို့ ပြောလာလို့ ကိုလေးမှာ ပြာယာခတ်ပြီး အပြေးလွှားနဲ့ ကျမကို လှမ်းအော် နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ စကားက (မိဆိုး) ရေ တစ်ယောက်တည်း မနေတော့နဲ့ နင်လည်း အသက်ကြီးလာပြီတဲ့။ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အရွယ်လွန်နေပြီတဲ့။ ငါတို့မိသားစုလေးလို ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစု ဘဝလေးကို ကြိုးစားဖန်တီးပါတဲ့။ ဒါပေမဲ့ အရာရာတိုင်းအပေါ် တန်ဖိုးထားတတ်အောင်လည်း ကြိုးစားပါလို့ ပြောခဲ့တယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းကအပြန် ဆရာတော် ဟောပြောဆုံးမတဲ့ တရားတွေနဲ့ ကြည်နူး ခွန်အားဖြစ်ခဲ့ရသလို ကိုလေးပြောတဲ့စကား တစ်ခွန်းကို ကျမ ရင်ထဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ (( အရာရာတိုင်းအပေါ် တန်ဖိုးတတ်အောင် ကြိုးစားပါ))တဲ့။
အသေချာဆုံးပေါ့။ တကယ်တော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အိမ်ဦးနတ်ဆိုတဲ့ ကိုလေးကို ကျမက အရင်ဆုံး ကြုံဆုံခင်မင် ချစ်ခွင့်ရသူပါ။ ဒါပေမဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အိမ်ဦးနတ်ဖြစ်လာမဲ့ ကိုလေးကို ကျမ တန်ဖိုးမဲ့အောင် လုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် တစ်ခြားလူပိုင်ဆိုင်လိုက်တဲ့အထိ ကျမ မိုက်မဲစွာပြုခဲ့တယ်။
ကိုလေး ကျမကို ထားသွားတုန်းကတော့ ကျမ ကိုလေးကို နာကျည်းမုန်းတီး အပြစ်မြင်မိပေမဲ့ ခုချိန်မှာတော့ ကျမ အမှားတွေကို ပြန်လည်ဝေခွဲတတ်ခဲ့ပါပြီ။ ကျမ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ချစ်သူနဲ့ဝေးပြီး ခုလို ကျမ တစ်ယောက်တည်း လက်မဲ့ဘဝဖြစ်အောင် ဘယ်သူမှ ဖန်တီးပေးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမကိုယ်တိုင် ရေးခဲ့တဲ့ဇာတ် ကျမကိုယ်တိုင် ဖန်တီးသူပေါ့။
(၉)နှစ်ဆိုတဲ့ ဝေးကွာမှု့အချိန်လေးမှာ ကိုလေးမှာတော့ ချစ်စဖွယ်မိသားစုလေး ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ကျမမှာတော့ တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်တည်းပါဘဲ။
စာဖတ်သူများလည်း ( မိမိချစ်သူ ဆီမှဖြစ်စေ ) ( မိတ်ဆွေတစ်ဦးတစ်ယောက် ဆီမှဖြစ်စေ ) အလေးထားမှု့ ဂရုစိုက်မှု အနစ်နာခံမှု သီးခံမှု့ အလိုလိုက်မှု့ ခွင့်လွှတ်မှု့ စိတ်ရှည်မှု့တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ လွှမ်းမိုးမှု့ရထားချိန်မှာ (တစ်ဖက်သူ၏ မေတ္တာကို) နားလည် ခံစားပေးပါ။ ( ဥပက္ခာ ) မပြုမိရန် အထူးသတိပြုပါ။
လောကမှာ ကိုယ်တန်ဖိုးအထားရဆုံးဆိုသော သက်မဲ့ပစ္စည်းများ ဆုံးရှုံးသွားတာ အစားပြန်လည် ဝယ်ယူလို့ရပေမဲ့ (ကိုယ်တန်ဖိုးအထားရဆုံး သက်ရှိပစ္စည်း ဆုံးရှုံးသွားသည်ဖြစ်စေ - မိတ်ဆွေကောင်း- ဆုံးရှုံးခဲ့လျှင် အစားထိုး ပြန်လည်ဝယ်ယူလို့မရတာကို မလွှဲမသေ သတိပြုစေချင်ပါတယ်။
ချစ်သော မောင်ငယ် ညီမငယ်လေးများ ကိုကို မမ များနှင့် စာဖတ်သူများအားလုံးလည်း မိမိချစ်သူအပေါ်တွင်ဖြစ်စေ မိတ်ဆွေကောင်းအပေါ်တွင်ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်သူ မသက်ဆိုင်သူများ အားလုံးအပေါ် (တန်ဖိုးထား အလေးထား ဆက်ဆံတတ်ကြပါစေ)လို့ စေတနာ သတိပေးရင်း ဘဝအမောတွေ ပြေနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ပိုစ့်တင်သူ အလွမ်းမြို့ အချိန် 11:39
ဟဲဟဲ မမပြောတာနော် ဟီး
တန်ဖိုးထားပါတယ် အားလုံးကို.. မမကိုလည်းတန်ဖိုးထားတယ်.:)
အရာရာတိုင်းအပေါ် တန်ဖိုးထားတတ်အောင်လည်း ကြိုးစား
အရာရာတိုင်းအပေါ် တန်ဖိုးထားတတ်အောင်လည်း ကြိုးစားဆိုတဲ့
တန်ဖိုးထားတတ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲလေ ။
အင်း ..တန်ဖိုးဆိုတာကလည်း တန်ဖိုး ဆိုတာကို
နားလည်တဲ့သူ၊ တန်ဖိုး ထားတတ်သူမှသာလျှင် ဘယ်လောက်တန်ဖိုးကြီးသလဲဆိုတာ သိကြတာ.. ဒါ ထရီဆာရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ပါ၊ ဘာအကြောင်းရယ်မဟုတ်ပါဘူး ....။
ကိုယ်တိုင် တယုတယနဲ့ တန်ဖိုးထားခဲ့ပေမယ့် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ ရတာမျိုးဆိုရင်ကော မမ မတန်ဘူးလို့ သတ်မှတ်ရမှာပေါ့နော်......
ဟုတ်ကဲ့မကြီးလွမ်း.. ကြည်ဖြူကိုယ်တိုင်လည်း အရာရာတိုင်းအပေါ် တန်ဖိုးထားတတ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်လေ..
အရာရာတိုင်းကို တန်ဖိုးမထားတတ်ခဲ့လို့ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတဲ့ နာကျင်မှုမျိုးကို ညလေးကြုံတွေ့ဖူးတယ် မမရေ ... နောက်ထပ်အဲလိုမဖြစ်အောင် မမပြောသလိုမျိုး “အရာရာတိုင်းကို တန်ဖိုးထားတတ်အောင်” ကြိုးစားနေထိုင်ပါ့မယ် ... :)
9 July 2012 at 01:02
အရာရာကို တန်ဖိုးထားတတ်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ် မမ ... :)